Lahatsoratra nataon'i Sofia Wilton momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Sofia Wilton
Sofia Wilton dia mpanao gazety amin'ny asany saingy manoratra tantara fohy amin'ny fotoana malalaka ananany. Navoaka tamin'ny gazety teo an-toerana ny tantarany ary ekena tsara amin'ny tantara manintona nataony. Manoratra bilaogy ihany koa izy Farihy B2B mifandraika amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny. Amin'ny maha mpanoratra mafana fo azy dia manokana ny fotoanany malalaka rehetra amin'ny fanoratana izy. Mipetraka any New York izy fa mandeha matetika noho ny asany. Izany dia manome azy fotoana hitrandrahana toerana vaovao ary koa mampiditra ny zavatra niainany ao amin'ny tantarany manome fahatsapana zava-misy.
Data momba ny varotra: ny lakilen'ny miavaka amin'ny 2021 sy ny ankoatr'izay
Sabotsy, Janoary 16, 2021 Sabotsy, Janoary 16, 2021 Sofia Wilton
Amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy misy fialan-tsiny amin'ny tsy fahafantarana hoe iza no hamidy ny vokatrao sy ny serivisinao ary izay tadiavin'ny mpanjifanao. Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo tahiry marketing sy teknolojia hafa tarihin'ny angona, lasa ny andron'ny varotra tsy voafantina, tsy voafidy ary ny jeneraly. Fomba fijery ara-tantara fohy talohan'ny 1995, ny marketing dia natao tamin'ny alàlan'ny mailaka sy ny doka. Taorian'ny 1995, niaraka tamin'ny teknolojia mailaka, nanjary voafaritra kely kokoa ny marketing. izany